I-Al numero zero, ifama yaseAeolian - I-Airbnb
I-Al numero zero, ifama yaseAeolian
Igumbi elise- indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguLuigi
Indlu ye-Aeolian ibekwe kwidome yentaba-mlilo yaseMzantsi Lipari, kwaye ijikelezwe buhlaza. Umbono ochukumisayo welali (inqaba kunye nezibuko), iPanarea kunye neStromboli kunye neziqithi zasendle. Isidlo sakusasa kunye nokutya kwasekhaya kubandakanyiwe kwixabiso.
Le yindlu yokugqibela yaseMonte Gallina (idome yentaba-mlilo yaseSouthern Lipari) ejikelezwe luhlaza (iMeditera maquis kunye neegadi). Umbono wokuphefumla kwisixeko esidala saseLipari, iPanarea & Stromboli, iziqithi zasendle kunye nonxweme lwase-Italiya. Ukutya kwasekuseni, ukutya okwenziwa ngokwakho, amanzi okusela afakiwe.
Indlu ijikelezwe ngokupheleleyo buhlaza kwaye ijikelezwe ngaphezu kweehektare ezi-3 zezityalo kunye nelitye le-lava.
Ingabamba ukusuka kwi-2 ukuya kwi-6 abantu \_ sinokubamba ukusuka kwi-2 ukuya kubantu aba-6
Cofa apha kwigumbi lesibini \_ igumbi lesibini: https://www.airbnb.it/rooms/5589086
Cofa apha ngendlu yonke \_ indlu yonke:
Inkonzo yokudlulisa yasimahla kwizibuko ekufikeni nasekuhambeni \_ Ukudluliselwa kwasimahla kwisheke kwaye ujonge.
Olunye udluliselo \_ ukhenketho lokuhamba olukhokelwayo \_ ukhenketho lwasemaphandleni
Le yindlu yokugqibela yaseMonte Gallina (idome yentaba-mlilo yaseSouthern Lipari) ejikelezwe luhlaza (iMeditera maquis kunye neegadi). Umbono wokuphefu…
4.99 (iingxelo zokuhlola 119)
Indlu ibekwe Monte Gallina, enye domes mlilo of South Lipari, 10 imizuzu ngemoto okanye scooter ukusuka iziko imbali, 15-20 ngeenyawo. Kufuphi nonxweme lwaseValle Muria, iCawe yaseSan Bartolo al Monte, iMonte Guardia, iifama, indawo yokuphumla yeHiker ...
Indlu iphezu kwedome yentaba-mlilo ebizwa ngokuba yi "Monte Gallina" (okanye i-Monte Giardina); imizuzu elishumi ngemoto okanye isikuta ukusuka kwisixeko esidala kunye namazibuko (15-20 ngokuhamba). Kufuphi kakhulu kwindlu: ulwandle lwentaba-mlilo yaseValle Muria (efikelelekayo nje ngokuhamba), icawa yaseSan Bartolo al Monte, i-Monte Guardia, indlela yokuhamba ye-Southern Lipari, iifama, i-Hiker's Rest.
Le cottage emhlophe phezu mlilo ebomvu oluhlaza, bevela entabeni, nolwandle kunye nesibhakabhaka njalo phambi kwakho, uze ke ilanga kunye kwelanga, mboli ukuduma kwaye ubushushu elundini kunye umoya uvuthuza ukusuka Greece njengokuba wena ukufunda incwadi entle ... Andithandabuzi ukuba konke oku kuya kukwenza uthandane. Yintoni le iphezu kwam kukukwenza uzive usekhaya!
Le cottage emhlophe phezu mlilo ebomvu oluhlaza, bevela entabeni, nolwandle kunye nesibhakabhaka njalo phambi kwakho, uze ke ilanga kunye kwelanga, mboli ukuduma kwaye ubushushu el…